यस्ता छन् अनुहारको छाला चम्किलो बनाउने ३ घरेलु औषधि – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७८ जेष्ठ ९, आईतवार ०६:०१
तपाईंको छालालाई भान्सामै हुने कतिपय औषधिहरुले निकै फाइदा पुर्याउँछ । भान्सामा पाइने विभिन्न चीजहरुको प्रयोगबाट अनुहारमा भएको दागदब्बा र फोहोर हटाउन सकिन्छ ।
अनुहारको छाला चम्किलो बनाउने ३ घरेलु औषधिहरु यस्ता छन्
१. मेवा र महको मास्क
२. घ्युकुमारी र काक्रोको प्याक
घ्युकुमारी र काक्रो दुवैले अनुहारलाई हाइड्रेट गर्छ । अनुहारको छालालाई चम्किलो बनाउन र सफा छालाको लागि यो निकै मद्दतगार हुन्छ । यसका लागि काक्रोको रस निकाल्ने र २ चिया चम्चा घ्युकुमारीको जेल मिसाउने र यसलाई अनुहारमा सुक्न दिने । १५ मिनेटपछि चिसो पानीले पखाल्ने ।
३. मह र टमाटरको प्याक
महमा प्राकृतिक एन्टिसेप्टिक, किटाणुरोधी र एन्टिइन्फ्लेमेटरी गुण हुन्छ । जसले अनुहारलाई दागरहित बनाउँछ । यसका साथै टमाटरमा पाइने विभिन्न पोषक तत्वले अनुहारको छालालाई स्वस्थ्य राख्छ । टमाटरमा हुने भिटामिन सीले अनुहारको दागधब्बा हटाउँछ । पोटाशियम र म्याग्नेशियम हुने भएकाले यी चिजले तपाईंको छालालाई मोस्चराइज र चमक प्रदान गर्छ । एजेन्सी